Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinti Xaflada Sanad guurada 28aad ee ka dhacday Melbourn.
Warbixinti Xaflada Sanad guurada 28aad ee ka dhacday Melbourn.
Taarikhdu markay ahayd 16 September 2012 waxaa ka dhacay munaasabad aad uweyn magaalada Melbourne ee wadanka Australiya. Munaasabadan oo aheyd xaflad lagu xusayo Sanad guurada 28aad ee kasoo wareegtay aasaaski Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya.
Xafladan oo dad aad u tiro badan isugu yimaadeen oo isugu jira haween, caruur iyo odeyada magaalada Melbourne ayaa waxaa ka qeyb galay masuliyiin sare oo kamid ah Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya. Mudane Cadaani Hirmooge afahayeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa kamid ahaa masuliyiinta Jabhada ee ka qeyb gashay Munasabadan.
Munasabada ayaa waxaa lagu furay aayadaha Quraanka iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Sheekh Maxamed oo ku dheeraday halganka Ogadeniya kasocda iyo waajib siday qof kasta ugu tahay innuu ka qeyb qaato halgankaas.
Afahayeenka JWXO Mudane Cadaani Hirmooge ayaa halkaas kasoo jeediyay warbixin uu kaga xog waramay Halganka Ogadeniya meesha uu marayo, guulaha Ururku soo hooyay iyo jabka gaadhay gumeysiga. Masuulka aya sidoo kale ka xog waramay taariikhda halgameed ee shacabka Somalida ogadeniya. Waxa masuulku u mahad celiyay Jaaliyada Melbourne ee soo aggaasintay xafladan iyo guud ahaaba somalida Ogadeniya meel kasta oo ay joogaan isaga oo ku amaanay firfircoonida iyo niyadooda wanaagsan.
Qudbadi masuulka ayaa dad badan galisay dareen xoriyadeed iyada oo haweenku mashxrado iyo sacab iyo Allaa weyn la isku daray madashii shirka.
Odeyada Magaalada Melbourne ayaa sidoo kale iyana ka hadlay madasha waxaana kamid ahaa Dr Xasen Yusuf Shuuriye iyo Maxamed Faarax oo halkaas taarikho ka waramay siiyayna hadalo dhiiri galin ah dhalinyarta soo koreysa.
Maxamed Aamin Masaayay oo ah nin dhalinyaro ah oo kasoo jeeda NFD ayaa halkaas isna ka hadlay isaga oo muujinaya taagerada ay shacabka NFD u qabaan halganka shacabka Somalida Ogadeniya.
Munaasabadan oo masuliyiin badan oo kamid ah Jaaliyada Ogadeniya ee Melbourn sida ururka dhalinyarada iyo haweenkuba ayaa waxaa isna halkaas kasoo jeediyay Warbixintii wax qabadka jaaliyada Melbourn Gudomiyaha Jaaliyada Mudane Xikam oo ka warbixiyay guulo ay jaaliyadu soo hoysay.
Jaaliyada Melbourn ayaa wax qabadkeda caalamka oo dhan laga daawaday oo ay kamid ahaayeen Warbixino laga soo dayay TV-ga Melbourn oo laga daawaday Gumeysiga fashilaadihi ay kala kulmeen melbourn oo u danbeysay Baroordiiqdi Males Zenawi iyo Cabdi UBO oo dhamaantood laga ceydhiyay goobihi ay rabeen inay wax ku qabsadaan.
Melbourn ayaa kamid ah Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee wax qabadkoodu caanka noqday.